Nizeriana Mankalaza Ny Fahalanian’ireo Britanika-Nizeriana Fito Ao Amin’ny Parlemanta Anglisy · Global Voices teny Malagasy
Others wonder if they could've been successful in Nigeria given the country's ethnic divisions.
Voadika ny 01 Aogositra 2017 5:49 GMT
Chi Onwurah, mpikambana ao amin'ny parlemantan'i Newcastle Afovoany, nandritra ny Fifanakalozana Ara-politikan'ny Mpikambana ao amin'ny Parlemanta tamin'ny 2013. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Policy Exchange. CC BY 2.0
Nisy fifidianana solombavam-bahoaka natao tany Grande Bretagne tamin'ny 8 Jona. Nandeha nandatsa-bato ireo mpifidy mba hifidy ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta avy amin'ny fari-pifidianana 650 manerana ny firenena. Sambany taminn'ny fotoana toy izao, fito tamin'ireo parlemantera nalefa dia manana fiaviana Nizeriana avokoa. Notaterin’ny vohikala Ventures Africa izay miorina any Nizeria fa “ny telo tamin'izy ireo dia nandresy teo ambanin'ny antoko Mpandala ny nentindrazana an'i Theresa May raha ny efatra hafa nandresy teo ambany “Antokon'ny mpiasa” an'i Jeremy Corbyn.”
Ireto avy ireo mpikambana fito voafidy sy ny fari-pifidianana soloiny tena: Bim Afolami (Hitchin sy Harpenden) Chineylu “Chi” Onwurah (Newcastle), Chuka Umunna (Streatham), Fiona Onasanya (Peterborough), Helen Grant (Maidstone sy The Weald ), Kate Osamor (Edmonton) ary Kemi Badenoch (Saffron Walden).
Noraisina tamim-pitiavana lehibe ilay vaovao rehefa niverina tany Nizeia. Izao no tsy maintsy nolazain'ny manampy manokana ny Filoha Nizeriana momba ny raharam-bahiny sy ireo any am-pielezana:
Miarahaba ireo olom-pirenena Nizeriana fito (7) noho ny fandresen'izy ireo tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tao Londona Ny filoha hajaina Abike Dabiri-Erewa. pic.twitter.com/IjilVe870c
Na izany aza, nampitandrina ny governemanta Nizeriana noho ny “fakàna ny fahombiazan'ireo olom-pirenena vahiny taranaka Nizeriana ” ny sasany any amin'ny firenena ao Afrika andrefana.
Matetika ny Nizeriana no maka ny fahombiazan'ny olom-pirenena vahiny taranaka Nizeriana. Ankalazaintsika toy ny hoe antsika manokana ireny fahombiazana ireny.
Mpampiasa Twitter iray hafa nampahatsiahy fa tsy noho ny maha-solontenan'i Nizeria azy no maha ao amin'ny parlemanta ireo solombavam-bahoaka ireo.
“Ry @abikedabiri, tsy niady ny hisolo tena an'i Nizeria any Londona izy ireo na nahazo ny fanomezandàlan'ny FGN. Hadalàna ity fihatsaram-belatsihin'ny fanjakana ity pic.twitter.com/kNIdQ6z6SX
Nanontany ny maha-Nizeriana ireo solombavam-bahoaka vaovao ireo i Omalicha.
Tsy Nizeriana biko izy. Raha efa nipetraka teto izy, tsy ho namafa na inona na inona ankoatra ny tranony. https://t.co/42Tng96GMD
Mpampianatra iray ao amin'ny Oniversite Anglisy miorina any Nizeria, Dr Adebisi Adewole, nanipika fa ny fizaran'ny foko izay mamaritra ny politika Nizeriana dia midika fa kely ny finoana fa hahomby any amin'ny firenena niaviany ireo solombavam-bahoaka nandresy. Nanoratra toy izao izy:
Any Nizeria, mety ho trany ny fanontaniana izy ireo, ‘Iza no mahalala ny fianakavianao?’ ‘Hay, Igbo ianao ary manana ny ràn'i Yoruba ary ny reninao fantatra fa nifanao fotoana taminà lehilahy Hausa’, Vehivavy ianao’ ‘Tanora loatra ianao’, ‘Ohatriona no anananao?’, ‘Iza no mpiantoka anao?’, ‘Silamo ianao’, sy ny sisa. Tsy misy olona hiasa loha firy momba izay resaka fahaizamanao amin'ny asa….
Nambaran'i Dapo Rotifa tao aminà lahatsoratra tao amin'ny Facebook io fihetsehampo io:
Kanto! Britanika 7 avy amin'ny taranaka Nizeriana nahazo seza ao amin'ny parlemanta nandritra ireo fifidianana Britanika. Ary araka ny efa nampoizina, tsy mahafehy tena isika rehetra, toy ny mahazatra, amin'ny zavatra vitan'ireo “mpiray tanindrazana” amintsika any an-tany hafa. Tena mendrika. Mahafaly ny foko koa izany ..
Ndeha isika hiverina ho any amin'ireo rahalahy sy anabavintsika izay nandresy tamin'ny fifidianana tany Angletera ary ny fankalazàntsika izany. Raha ny marina, manana olana iray amintsika aho ny amin'izany. Mamelà ahy hametraka ny fanontaniana na dia manahirana aza: nahoana isika no mankalaza fahombiazana ivelan'ny tanintsika fa mahita izany ho fahotana ato anatin'ny tanintsika? Hitomany hidradradradra toa adala ny lehilahy Osun mankalaza ny fahombiazan'ny Nizeriana antsika any Angletera raha toa misy Oyo izay niaina nandritra ny fiainany tany Ile-Ife maniry ny hitsangana ho amin'ny fifidianana any Osun. Eny, afaka miteny ianao hoe tsy mitovy ny tontolo iainana, fa rahoviana isika vao hanomboka hanova ny tontolo iainantsika ho afaka manaiky ny toetra iraisan'ny maha-olona antsika?